Kudengenyeka kwenyika kwakasimba kunozunungusa chitsuwa cheIndonesia cheSumatra
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Indonesia Kuputsa Nhau » Kudengenyeka kwenyika kwakasimba kunozunungusa chitsuwa cheIndonesia cheSumatra
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Indonesia Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Pakave pasina mishumo yekukuvara zvichitevera kudengenyeka, kwakaitika nguva pfupi yapfuura pakati pehusiku nguva yenzvimbo (5pm GMT).
Indonesia inozununguswa nezviuru zvekudengenyeka kwenyika gore negore.
Chitsuwa chikuru cheIndonesia cheSumatra chinogara vanhu vanopfuura mamiriyoni 58.
Kudengenyeka uku kwakayera 6.2-magnitude uye hapana chenjedzo yetsunami yakapihwa mukuitika kwayo.
US Geological Survey (UGS) yakashuma kuti kudengenyeka kwenyika kwakasimba kwe5.9-magnitude kwakanyorwa pedyo nechokuchamhembe kwakadziva kumadokero kweIndonesia chitsuwa cheIndonesia. Sumatra nhasi.
Maererano ne Indonezhiya's Meteorology, Climatology, uye Geophysical Agency, kudengenyeka kwakayera 6.2-magnitude.
Hapana chenjedzo yetsunami yapihwa panguva yekudengenyeka.
Chitsuwa chikuru che Sumatra musha kune vanhu vanopfuura mamiriyoni 58. Pakave pasina mishumo yekukuvara zvichitevera kudengenyeka kwenyika, uko kwakaitika nguva pfupi yapfuura pakati pehusiku nguva yenzvimbo (5pm GMT).
Vanhu vanosvika vatatu vakafa uye vamwe vakati wandei vakakuvara pakaitika kudengenyeka kwenyika kuchitsuwa chakakurumbira cheIndonesia cheBali muna Gumiguru 16 uye kwakakonzera kuondomoka kwevhu. Kudengenyeka kukuru kwe6.2-magnitude kwakarova nyika yechitsuwa muna Ndira, ndokuparadza zvivakwa zvakawanda, kusanganisira chipatara, uye zvakakonzera kufa kwevanhu vanopfuura zana.
Inowanikwa munharaunda inodaidzwa kuti Pacific Ring yeMoto - inzvimbo yakaita arc inogara ichiitika seismic chiitiko - Indonezhiya inozununguswa nezviuru zvokudengenyeka kwepasi gore negore.